Barnaamijka caafimaadka iyo nafaqada ee CISP
| Caafimaadka iyo nafaqada | Taariikhda Waxqabadka Caafimaadka ee CISP’s |
Barnaamijka caafimaadka iyo nafaqada ee CISP waxaa uu ka kooban yahay saddex waxyaabood:
Caafimaadka aasaasiga ah
Aqoonta iyo kartida caafimaadka
Daryeelka caafimaadka aasaasiga ah
Arrinta aan diiradda saareyno
In kasta nabadgelyo-xumo ay ka jirto bartamaha Soomaaliya, haddana CISP waxaa ay bixinta adeegyada caafimaadka aasaasiga ah iyo kan degdegga ah ka waddaa Mudug iyo Galgaduud.	CISP waxaa uu dadaalkeedu ku wajahan yahay daryeelka caafimaadka ka hortagga ah iyo kan nafaha lagu badbaadiyo, oo badanaaba ku wajahan dadka ugu nugul, gaar ahaan haweenka iyo carruurta shan sano jirka ka yar.
15 Xarumaha Caafimaadka Hooyada iyo Dhallaanka ah ayaa la taageerey;
Bukaan-socod wadartoodu tahay 90,887 ayaa soo booqdey, kuwaas oo ay ka mid yihiin 32,541 carruur 5 sano jir ka yar;
Ilaa 3,000 carruur ay da’doodu u dhaxayso 5 ilaa 59 bilood ayaa lagu guuleystey in laga daweeyo Nafaqo-xumo Aad u Ba’an;
6,116 carruur ah ayaa si buuxda loo tallaaley;
1,977 ayaa laga umuliyey;
15,550 haween ah ayaa taageero la siiyey intii ay uurka lahaayeen.
Waxqabadyada ugu waaweyn:
Daryeelka ka horreeya dhalmada;
Ka umuliyn: (tan caadiga ah) daryeelka degdegga ah ee uurreyda iyo umulaha;
Nafaqeyn (carruurta <59 bilood): baaritaanka nafaqada, daaweynta carruurta nafaqo-xumada ba’an iyo tan dhexdhexaadka ah ay hayso iyada oo lagu daweynayo barnaamijyada daaweynta bukaan-socodka iyo kuwa quudinta dheeriga ah.
MCH: Ceell Dheere, Xarardere, Dhuusamareeb and Hobyo;
Nafaqada: South Mudug and Galgaduud;
Daryeelka Uurreyda iyo Umulaha (ee aasaasiga ah): Dhuusamareeb hospital and Xerale MCH.
Daryeelka Caafimaad ee Heerkiisu Sarreeyo
Arrinta aan diiradda saareyso
Maaddaama uu dagaal sokeeye dalka ka socdo, badi kaabayaashii caafimaadku waa ay burbureen, meelaha ay weli ka jiraannna maaliyad la´aan ayaa hoos u dhigeysa awoodda ay ku shaqeyn karaan. CISP waxa ay aaminsan tahay in ka-shaqeysiinta tas-hiilaadka caafimaadka ee Soomaaliya ay tahay in si degdeg ah wax looga qabto, waxaana ay sii waddey in ay taageerto cusbitaallada degmooyinka Xarardheere, Ceel Dheer iyo Dhuusamarreeb xataa waqtiyada ay maaliyaddu ka kala go’do.
31,668 bukaan-socod ayaa heley la-talin caafimaad;
3,507 bukaan ayaa la seexiyey;
225 qalliinno culus ah ayaa la sameeyey.
5,160 qof ayaa heley adeeg la-talin caafimaad;
11 bukaan ayaa la siiyey daawada anti-retroviral.
96 bukaan ayaa la daweeyey iyada oo daawada si toos ah loogu kormeerayo.
Taageero la siiyo adeeg-bixinta cusbitaallada (daaweynta qalliin iyo tan caafimaad, daaweynta degdegga ah iyo tan la doorto);
HIV/AIDS: Daryeelka Ka-hortagga iyo daaweynta, Adeeg La-talin Khiyaari ah oo Sirna ah, Ka-hortagga in Hooyadu fayruska u gudbiso Ilmaheeda, bixinta Daawada Anit Retro Viral;
Qaaxada: daaweynta, xakameynta iyo maareynteeda.
Cusbitaallada: Ceel Dheer, Xarardheere, Dhuusamarreeb;
Qaaxada: Cusbitaallada Ceel Dheer, Xarardheere iyo Ceelguula;
HIV: Ceel Dheer, Xarardheere, Dhuusamarreeb.
Jiritaan la’aanta xirfadlayaal caafimaad oo aqoon leh iyo dadka daryeelka caafimaadka bixiya oo aan helin tababar ku filan ayaa qayb ka ah tayada liidata ee daryeelka caafimaadka ee Soomaaliya. Si arrintan wax looga qabto, CISP waxaa ay maalgelisaa tababaridda iyo karti-dhiska shaqaalaha caafimaadka.
40 Shaqaale caafimaad ah ayaa lagu tababarey caabuqyada fursad-gaadka ah ee la xiriira HIV/AIDS iyo Daawada Anti Retro Viral;
30 Shaqaale Caafimaad ayaa lagu tababarey arrimaha la xiriira Nafaqada;
30 Shaqaale Caafimaad ah ayaa lagu tababarey arrimo kala duwan oo caafimaadka la xiriira: MCH, daryeelka degdegga ah ee uurreyda iyo umulaha, ka hortagga iyo daryeelka qaaxada.
Karti-dhisidda maamulka cusbitaalka, oo ay ka mid tahay sameynta:
Shuruudo jaango’an oo lagu qiimeeyo waxqabadka cusbitaallada;
Nidaam macluumaadka maaliyadda ah;
Xogta urursan (database) ee shaqaalaha caafimaadka;
Nidaamka macluumaadka maareynta caafimaadka;
HIV/AIDS: hawlaha wacyigelinta bulshada, waxbarashada carruurta dugsiyada, tababarka shaqaalaha caafimaadka;
Nafaqada: ku tababaridda shaqaalaha caafimaadka maareynta wax u qabashada carruurta nafaqo-xumada ba’an iyo tan dhexdhexaadka ahi ay hayso;
Qaaxada: Waxbaridda bulshada
Maareynta cusbitaallada: Ceel Dheer, Xarardheere, Dhuusamarreeb.
Home Hawsheenna Caafimaadka iyo Nafaqada Barnaamijka Caafimaadka iyo Nafaqada